दाँतको बचाउने कसरी ?
दाँत मुखभित्र हुन्छ। खाद्य पदार्थ चपाउन मात्रै हैन अनुहारलाई सुन्दर देखाउन पनि दाँत स्वस्थ र मजबुत हुन आवश्यक छ। दाँत नभएको अवस्थामा अनुहारै कुरुप देखिन्छ।
यौनमा पुरुषको संवेदनशीलता
यौन जोडीले यौन क्रियाकलाप गर्दा यौन जोडीको शारीरिक तथा मानसिक अवस्थामा बडो ध्यान दिनुपर्छ। यौन क्रियाकलाप संवेदनशील भएकाले यौन क्रियाकलाप तथा सम्पर्कको समयमा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ। महिलाले शिशुलाई स्तनपान गराइरहेको अवस्थामा त झन् महिलाले मात्रै हैन पुरुष यौन जोडीले विशेष ख्याल गर्नुप-यो।
व्यक्ति स्वस्थ रहने विभिन्न प्राकृतिक उपचार पद्धतिमध्ये उपबास एक उपचार पद्धति हो। चिकित्सकका अनुसार उपबास बस्नाले व्यक्तिमा ऊर्जा थपिन्छ। उपबासलाई अंगे्रजीमा फास्टिङ भनिन्छ। अन्न नखाई पानी पिएर बसिने चिकित्सकीय उपचार पद्धति नै उपबास हो।
महिला बढी बाँच्ने तीन कारण
पुरुषको तुलनामा महिलाको औसत आयु लामो हुन्छ। नेपालमा मात्रै हैन सामान्यतः संसारभरै पुरुषको तुलनामा महिलाको औसत आयु लामो हुने चिकित्सक बताउँछन्। अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, भारत, चीनजस्ता मुलुकमा पुरुषको तुलनामा महिलाको औसत आयु लामो हुने देशलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ। अध्ययनअनुसार महिलाको सय वर्षभन्दा बढी आयु हुने सम्भावना हुन्छ। पुरुषको कम।
मुख्य रुपमा जीवनको ज्ञान दिने अंग मस्तिष्क हो। मस्तिष्क मानव शरीरको सबैभन्दा संवेदनशील र महत्वपूर्ण अंग हो। मस्तिष्क शरीरको ‘मास्टर ब्यान्ड’ हो। मस्तिष्कले नै व्यक्तिलाई शारीरिक तथा मानसिक रुपमा नियन्त्रण र परिचालित, परिस्कृत गर्छ।
‘तिमीलाई छाड्ने निर्णय गरेँ'
सधैँ मैले फकाउनु पर्ने, सधैँ मैले नै माफी माग्नुपर्ने, मैले नै सहनुपर्ने। यसरी कहिले सम्म चल्छ। तिम्रो गल्तीमा पनि मैले नै सहनुपर्ने। मैले तिम्रो कुन गल्तीको माफी दिइनँ ।
सुत्केरीमा यौन व्यवस्थापन
हामीले यसअघि नै महिला सुत्केरी भएको कति समयमा यौन सम्पर्क गर्नु उपयुक्त हुन्छ लगायतका विषयमा चर्चा ग-यौँ। अब कुरा गरौँ सुत्केरी भएको समयमा यौनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा महिला र पुरुष मस्तिष्क तथा शारीरिक संरचना, क्रिया फरक हुन्छ। जसको कारण पुरुष र महिलाको व्यवहार फरक देखिनु स्वाभाविकै हो।
‘नेपालमा रेड लाइट एरिया चाहिन्छ’
नेपालमा रेड लाइट आवश्यक छ त ? हुनुपर्छ। अहिले लुकिछिपी भइरहेको काम एउटा क्षेत्र तोकेदिएपछि त्यतै हुन्छ। त्यो राम्रो पनि हो।
‘कमेन्टले ज्यान जोगियो’
अस्ति ६ दिनअघि एउटा महिलाको पोष्ट आएको थियो यो पेजमा। उनले लेखेकी थिइन् गर्भपतन गर्न लगायो तर विवाह गरेन। हो म त्यही पोष्टवालीको ब्वाइफ्रेन्ड हो। उसलाई मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा पु-याउने मै हो।
गर्भधारण गर्नुपूर्व स्वास्थ्य जाँचाैं
महिला गर्भवती भएपछि त गर्भ जाँच गर्नु पर्छ भन्ने जनचेतनाको विकास हुँदै गएको छ। तर नेपालमा गर्भवती हुनुपूर्व स्वास्थ्य जाँच गराउनु पर्छ भन्ने चेतनाको कमी छ। महिला गर्भवती हुनका लागि शारीरिक तथा मानसिक रुपमा योग्य छिन् वा छैनन् भन्ने विषयमा गर्भवती हुनुपूर्व जाँच गर्न स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नेको संख्या न्यून हुन्छ।
यसरी हुन्छ बलियो मुटु
मुटु शरीरको रक्तसञ्चार प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुन्छ। विशेषगरी शरीरका अंग–प्रत्यङ्गमा रक्तसञ्चारको माध्यमबाट पोषण तत्व पु-याउन मुटुको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसैले मुटु सधैँ स्वस्थ र मजबुत हुन आवश्यक छ।
स्तनपान र यौनको सम्बन्ध
औसतमा महिला महिनावारी भएको दिनदेखि २८४ दिनमा गर्भमा रहेको भ्रुण पूर्ण बयस्क भई आमाको भित्री शारीरिक वातावरणबाट बाहिरी वातावरणमा जन्मन्छ। त्यसैगरी महिलाको भ्रुण र शुक्रकिट निशेचित भएको २७० दिनमा गर्भमा रहेको भ्रुण जन्मन्छ।
बेकारको एकतर्फी माया
ओहो कस्तो गाह्रो, धेरै नै गाह्रो हुँदो पो रहेछ त कसैलाई भुल्न। जसरी अन्तिम श्वास लिइरहेको व्यक्तिलाई श्वास जान गाह्रो हुन्छ। धेरै गाह्रो हुने रहेछ कसैलाई सम्झिएर बाँच्न पनि।
थरिथरिका बाथ रोग
बाथरोगका विभिन्न प्रकार हुन्छन्। जसमध्ये ‘कनेक्टिभ टिस्यु’ रोग बाथ रोगअन्तर्गत पर्ने रोग हो। सामान्यतः बाथ रोग भन्नाले ‘अटोइम्युन रोग’ भन्ने बुझिन्छ। ‘अटोइम्युन रोग’मा शरीरका आफ्नै कोशिकाहरुले शरीरका अन्य कोशिकाहरुलाई हानि पु-याइरहेका हुन्छन्। यो एक किसिमको दीर्घ रोग हो।
फोक्सो जोगाउने तरिका
व्यक्ति बाँच्नु भनेको दोहोरो रुपमा स्वासप्रश्वास प्रक्रिया चलिरहनु हो। व्यक्ति स्वस्थ हुनका लागि स्वासप्रश्वास पक्रिया सक्रिय र सन्तुलित रुपमा चल्न आवश्यक छ। स्वासप्रश्वासको सम्बन्ध शरीरको भित्री अंग फोक्सोसँग प्रत्यक्ष रुपमा रहेको हुन्छ। त्यसैले व्यक्ति स्वस्थ रुपमा बाँच्नका लागि फोक्सो स्वस्थ हुन आवश्यक छ।
‘२५ वर्षमा पहिलो पटक सेक्स गरियो’
विवाह उमेरको आधारमा भन्दा पनि आफू जिम्मेवारी वहन गर्न सक्षम भएपछि गर्ने हो।
शरीरमा मुसा आएकै कारण ज्यानै जाने त जोखिम हुँदैन तर त्यसले शरीरका अंगको सुन्दरतामा भने अवश्य खोस्छ। सुन्दरतामा रुचि राख्नेहरुले त त्यसलाई तुरुन्तै हटाउने उपाय खोज्छन् तर ज्यानै जाँदैन भने किन चलाउने भनेर मुसा पालेर बसिरहनेलाई चिकित्सकको सुझाव छ, ‘यसलाई पालेर नराख्नुस्।’ त्यसमाथि कतिपय मुसा त ज्यानै लिने किसिका समेत हुन्छन्।
याैन प्रस्ताव सामान्य
पुस्तक, पाठ्यक्रम तथा सञ्चारमाध्यमले यौन शिक्षालाई सहज बनाएको छ। यौन अभ्यासलाई भने नियम कानुनले कठोर बनाएको छ।
अरुको कुरामा के चासो ?
मेरो घर नजिकका एक जना काका जहिल्यै हाम्रो घरमा आएर मेरा बुबासँग गनगन गर्छन्। कस्ता–कस्ता मान्छे हुन्छन् है संसारमा ? जहिल्यै छोराको विवाह गर्ने बेला भएन र ? किन नगरिदिएको अहिलेसम्म रे ! तरिका हो ?